ကမ္ဘာတဝှမ်း အသုံးများတဲ့ Google သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေရေး အင်တာနက် စာမျက်နှာရဲ့ အီးမေးကို အသုံးပြုသူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သတင်းထောက်တွေရဲ့ ကွန်ပြူတာတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်းက တိုက်ခိုက်ဖို့ ကြိုးစားခံခဲ့ရကြောင်း Google က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့အကောင့်ကို အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြု တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေက သိမ်းပိုက်ရယူဖို့ ကြိုးစားနေပုံရတယ် ဆိုတဲ့ သတိပေးစာ ပေါ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီသတိပေးစာပေးပို့ကြောင်း Google ရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Taj Meadows က အတည်ပြုပြောဆိုခဲ့သလို၊ သတင်းထောက် ၁၂ ယောက်လောက်ကလည်း ဒီသတိပေးစာ ရရှိတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ စကားဝှက်တွေကို ပြောင်းလဲခဲ့ကြရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ပြည်တွင်းက အေပီ၊ အေအက်ဖ်ပီ၊ ရိုက်တာ၊ ကျိုဒို သတင်းထောက်တွေ၊ The Voice နဲ့ Eleven ဂျာနယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် သတင်းထောက် ဘာတေးလစ်တနာ တို့အပြင် တခြားနိုင်ငံတွေက သတင်းထောက်တွေလည်း ပါဝင်ကြပါတယ်။
Google က အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြု တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေလို့ ဆိုပေမဲ့ ဘယ်အစိုးရဆိုတာ တိတိကျကျမပြောခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာအစိုးရ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ ပြန်ကြားရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ကတော့ Google အနေနဲ့ ဒီကိစ္စအတွက် တာဝန်ရှိသူ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုဖို့လိုကြောင်း၊ အခုလို အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြုလို့ ဝေဝေဝါးဝါးပြောဆိုတာဟာ မိမိတို့အစိုးရကို ထိခိုက်ကြောင်း၊ အစိုးရမှာ ဒီမူဝါဒမရှိကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပြီး၊ သူရဲ့ Gmail မှာလည်း ဒီသတိပေးစာရရှိကြောင်း Facebook စာမျက်နှာမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လကလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အဓိကရ သတင်းမီဒီယာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ The New York Times နဲ့ The Wall Street သတင်းစာတွေရဲ့ ကွန်ပျူတာကွန်ရက်တွေဟာ တရုတ်ပြည်က လာတယ်လို့ယူဆရတဲ့ အင်တာနက် ထိုးဖေါက်တိုက်ခိုက်မှုခံခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရကို မြန်မာ Hacker တွေ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်
မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ဗီဇာပိတ်ပင်မှု အမေရိကန် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီ
EU ပိတ်ဆို့မှုတွေ ရုတ်သိမ်းပေးတဲ့ အပေါ် မြန်မာအစိုးရ ကြိုဆို
ကင်တားနားရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း အစိုးရ တု့ံ့ပြန်
အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ သမ္မတထံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သဝဏ်လွှာပေးပို့
စစ်တပ်ချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး မြန်မာရောက်ရှိ
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပြောကြား
That's his duty. I think, the people those who have read his former articles could understand very well.
Yes, U Ye' Htut is right that Government do not involve in this case but he doesn't know or may be he pretend does not know that some organisation behind the Government is doing it. This is normal pratice of Military and its followers.
Feb 12, 2013 08:16 PM